बादे महामन्त्रीमा विजयी हुँदा शिव–तीर्थ समूह दुःखी ! – मिलिजुली खबर
बादे महामन्त्रीमा विजयी हुँदा शिव–तीर्थ समूह दुःखी !
नेपाली काँग्रेसको बागमती प्रदेश अधिवेशनका लागि हेटौँडा पुग्दा लगभग काभ्रे काँग्रेसको गुट तितर बितर भइकेको थियो ।
त्यसको उदाहरण काभ्रेबाट अधिवेशनका लागि हेटौँँडा पुगेका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुकुलका उम्मेदवारसँग खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको फोटोले पनि पुष्टि गर्छ । हेटौँडा पुग्दा काभ्रेमा निकै बालिया मानिएको शिव–तीर्थ समूह पनि चोइटिएको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै मधु आचार्य समूहले पनि आफु खुशी मतदान गरेको बताइन्छ । तर जिल्लाबाट प्रदेश कार्यसमितिमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिएका कञ्चनचन्द्र बादेलाई हराउन शिव–तीर्थ समूह निकै सक्रिय भएर लागेको आरोप बादे खेमाको छ । र पनि बादेले महामन्त्रीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भए ।
२ जना महामन्त्री पदका लागि ६ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । जसमा बादे ९९५ मत सहित जीत हासिल गर्नुभएको हो । बादेको जीतमा खुशी हुने काभ्रेमा निकै सानो समूहमा मात्रै देखिएको छ । हुन त बादे प्रकाशमान सिंहको काभ्रेमा गुट चलाउनु हुन्छ । यो समूहमा आफैमा सानो छ ।
बादे महामन्त्रीमा विजयी हुँदा शिव–तीर्थ समूह निकै निराश बनेको देखिन्छ । नवनिर्वाचित सभापति तीर्थ लामाले अहिलेसम्म पनि महामन्त्रीमा विजयी हुनुभएका बादेलाई औपचारिक रुपमा बधाई तथा शुभकामना नदिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । प्रदेश सभापति इन्द्र बहादुर बाँनियालाई केन्द्रीय सदस्य शिव हुमागाई र जिल्ला सभापति तीर्थ लामाले बधाई तथा शुभकमना दिइसकेका छन् ।
महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दादेखि नै काँग्रेस बनेपा नगर कार्यसमितिले समेत प्रचारप्रसारमा कुनै चासो नदिएको बादे निकटका कार्यकर्ताहरुको आरोप छ । बनेपामा शिव, तीर्थ समूहका पदाधिकारी छन् । गुट जे सुकै भएपनि जिल्लाबाट महत्वपूर्ण पदमा विजयी हुँदै गर्दा सान्वनाका शब्द समेत यी दुई नेताले नलेख्दा काँग्रेसभित्र गुट कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
काभ्रे आएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘विकास निर्माण समयमै पुरा हुन सबैको सहयोग अपरिहार्य’
काभ्रेको तल्लो बालुवामा फेला परेको श वको सनाखत